Ebuno | सशुल्क सर्वेक्षण अनलाइन आज पैसा कमाउन शुरू गर्नुहोस्!
हामी सर्वेक्षण मात्र अनलाइन छौं
Ebuno को साथ, तपाईं धेरै सजिलो र सरल सर्वेक्षणहरू पूरा गरेर अनलाइन पैसा बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए तपाईले वास्तवमै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ जब तपाईको राय सुनेको छ।
सक्रियता ईमेल पुन: पठाउनुहोस्
पञ्जीकरण फारममा फर्कनुहोस्
सुरु गर्नुहोस् इबुनो
Ebuno का लागि साइन अप गरेर, तपाईं Ebuno लाई सहमत गर्नुहुन्छ सेवाका सर्तहरू, गोपनीयता नीति & नियम.
वा सामाजिक मिडियाको साथ कनेक्ट गर्नुहोस्
दर्ता पूरा भयो!
अब, तपाईंको ई-मेल ठेगाना प्रमाणित गर्न हामीबाट ईमेलको लागि तपाईंको इनबक्स जाँच गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले minutes मिनेट भित्र फेला पार्नुभएन भने, तपाईंको स्पामबक्स जाँच गर्नुहोस्।
थप समर्थनको लागि। कृपया सम्पर्क गर्नुहोस [ईमेल सुरक्षित]
नयाँ ईमेल पठाइयो!
एक नयाँ सक्रियता ईमेल पठाइएको छ यदि ईमेल हाम्रो डाटाबेस मा पंजीकृत छ।
तपाईं Ebuno मा के गर्न सक्नुहुन्छ।
अनलाइन सर्वेक्षणहरूमा उत्तर दिनुहोस् जुन तपाईंको प्रोफाइलसँग मिल्छ र भुक्तानी हुन्छ।
तपाइँको खरीदबाट अनलाइन अनलाइन पैसा प्राप्त गर्नुहोस्।
समुदायको आवाज खोजी गर्नुहोस्, समुदाय प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् वा आफ्नै बनाउनुहोस्।
सशुल्क सर्वेक्षणको बारेमा अधिक जानकारी
भुक्तानी गरिएको सर्वेक्षणहरू के हुन्?
एक सशुल्क सर्वेक्षण मात्र नियमित सर्वेक्षण हो जुन तपाईंलाई यो पूरा गर्नका लागि पुरस्कार दिन्छ। त्यहाँ कम्पनीहरू छन् कि उपभोक्ताहरु को लागी उनीहरुका उत्पादनहरु र सेवाहरु को बारे मा सोच्न को लागी धेरै पैसा खर्च गर्दछन् र उनीहरु के राम्रो गर्न सक्छन्।
म कति कमाउँछु?
प्रत्येक सर्वेक्षणको मूल्य धेरै कारकहरूको आधारमा फरक पर्न सक्छ जस्तै यसलाई पूरा हुन लाग्ने समय। सामान्यतया तपाईं प्रत्येक १० मिनेट सर्वेक्षणको लागि $ १ प्राप्त गर्नुहुन्छ तर उच्च हुन सक्दछ। यो तपाइँ कसरी जवाफ जवाफ दिन छिटो मा निर्भर गर्दछ।
कसरी भुक्तानी सर्वेक्षणहरू Ebuno मा काम गर्दछ
कम्पनीहरू निरन्तर आफ्नो उत्पादन र सेवाहरू सुधार गर्ने तरिकाहरू खोज्दैछन् र त्यो गर्नका लागि एक तरीका भनेको उनीहरूको उपभोक्तालाई उनीहरूको राय सोध्नु हो। वास्तवमा धेरै कम्पनीहरूले हरेक वर्ष लाखौं डलर सशुल्क सर्वेक्षणमा खर्च गर्दछन् जुन सबै बहुमूल्य जानकारी प्राप्त गर्न सक्षम हुन्छन् जुन तपाईंको राय हो! एकपटक कम्पनीले एक सर्वेक्षण सेट अप गरेपछि, हामी उनीहरूलाई आफ्ना प्रयोगकर्ताहरू समक्ष बाहिर निकाल्छौं र केही प्रश्नहरूको उत्तर दिन प्रोत्साहन दिन्छौं। एकचोटि तपाईंले केहि सर्वेक्षणहरूको जवाफ दिनुभएपछि, तपाईं आफ्नो आय भुक्तानी प्रोसेसरमा फिर्ता लिन सक्षम हुनुहुनेछ। आज साइन अप गर्नुहोस्! तपाईको पहिलो भुक्तान गरिएको सर्वेक्षणमा उफ्रिनु भन्दा यो २- 2-3 मिनेट मात्र लाग्छ।
कसरी तपाईं Ebuno मा सशुल्क सर्वेक्षण संग पैसा कमाउने
तपाईं Ebuno मा सर्वेक्षणहरूको उत्तर दिएर पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनै पनि अन्य सर्वेक्षण अनलाइन उत्तर दिन जत्तिकै सजिलो छ, तर भिन्नता यो हो कि तपाईंलाई यो गर्न भुक्तानी गरिन्छ। तपाइँ कति कमाउनुहुन्छ, कति सर्वेक्षणहरु लिनुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
सशुल्क सर्वेक्षणले कम्पनीहरूको विकासलाई मद्दत गर्दछ
कम्पनीहरूले हाम्रो प्लेटफर्ममा सर्वेक्षण प्रकाशित गरेर आफ्नो व्यवसाय सुधार गर्न सक्दछन्। त्यस पछि, हामी हाम्रा प्रयोगकर्ताहरूलाई यी सर्वेक्षणहरूको जवाफ दिनको लागि प्रोत्साहन प्रदान गर्दछौं जसले हाम्रा सर्वेक्षणहरूलाई थप सर्वेक्षणहरूको उत्तर दिनको लागि प्रेरित गर्दछ।
एबुनो एक स्विडेनी कम्पनी हो जुन २०१ 2017 देखि सर्वेक्षण उद्योगमा वरपर रहेको र काम गर्दै आएको छ। प्लेटफर्म अद्वितीय र एक विशेष डिजाइन र प्रयोगकर्ता इन्टरफेसको साथ छ। तपाईंले आफ्नो पहिलो सर्वेक्षण लिन सुरु गर्नु भन्दा पहिले, तपाईं आफुको बारेमा केही आधारभूत जानकारी भर्नुहोस् हामीलाई उत्तम सम्भावित अवसरहरूसँग तपाईंलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्न। सुरू गर्न केही पैसा लिन्छ र केहि पैसा कमाउन सुरू गर्नुहोस्।
त्यसो भए, तपाईं कत्ति धेरै भुक्तान सर्वेक्षणमा एबुनोमा कमाउन सक्नुहुन्छ?
के तपाईं सर्वेक्षण गरेर कमाउन सक्नुहुनेछ धेरै कारकहरूमा निर्भर गर्दछ। प्रोत्साहन प्रश्नहरूको गहिराइमा निर्भर गर्दछ, यो कत्ति कडा हो यो योग्य हुन र सर्वेक्षण कति लामो छ। कम्पनीहरू सामान्यतया उपभोक्ता को एक विशेष प्रकार को लागी छन् तपाईं प्रविष्ट गरी सबै सर्वेक्षण को लागी योग्य छैन।
तपाईं या त PayPal वा ઉપगठन सेक्सनमा उपलब्ध उपहार कार्डमा आफ्नो आय फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ एबुनो जस्ता विश्वस्त कम्पनी प्रयोग गर्नुभयो भने, तपाई स्क्याम्ड हुने सम्भावना कम हुनेछ।
SwishPanelen Ebuno को लागि एक साझेदार वेबसाइट हो। थप पढ्नको लागि, जानुहोस् SwishPanelen.se
सर्वेक्षण को भुक्तानी गरिन्छ?
सर्वेक्षणहरू घोटालामा भुक्तान गरिएको छ?
भुक्तान गरिएको सर्वेक्षण अनलाइन - यो कसरी कार्य गर्दछ र तपाईं तिनीहरूलाई फेला पार्नुहुनेछ
अनलाइन पैसा कमाउनको लागि उत्तम सर्वेक्षण साइटहरू
हामीले धेरै तिर्ने गरेका छौं $ 100.000 USD हाम्रो 100.000 + सदस्यहरु
के - के हुन् तपाईं कुर्दै हुनुहुन्छ?
सामेल इबुनो आज र आफ्नो रायबाट पैसा कमाउन शुरू गर्नुहोस्
अब हामीसँग सामेल हुनुहोस्!